Xog Culus: Cabdi Iley – Current Man of the Country (CMC) oo kasbadey kalsoonida Shucuubta Itoobiya oo idil | Somaliland Today
← MA DHIBAA MISE WAA DHEEF XAADHITAANKA WADOOYINKA CAASIMADA HARGAYSI
Dalladda Dhalinyarada Gobolka Hawd Oo Shahaado Sharafeed Iyo Xeedho Ku Maamuusay Wasiir Maxamuud Xaashi Cabdi. +Sawirro. →
Xog Culus: Cabdi Iley – Current Man of the Country (CMC) oo kasbadey kalsoonida Shucuubta Itoobiya oo idil
Sida aad ka dheehan kartaan Cinwaankan, Muhiimadda Qoraalkani ma aha mid sadarro lagu soo koobi karo, in Buug lagu qoro mooyee.
Xogtan Culus oon aad u soo koobey, (Bulshada inteeda Caqliga & Caafimaadka qabta loo sheegi maayee) waa Dhanbaal ku wajahan inta Yar ee Qaswadayaashu hagayaan. Waa inta ilaahbaa Garaadka bixiyee, aan iyagu laheyn Caqli & Cilmi ay kukala gartaan waxa u Daran iyo waxa u Dana.
Xog uruurintan muddaba la wadey oo dhowaan la soo gabagabeeyey, iyadoo la adeegsanayo hab Casri ah oo Cilmiyeysan amaba Al Jebreysan (Loo adeegsadey oo aad ka dhex heli karto Xisaabta loo yaqaano Algebra) waxaa lagu ogaadey in badiba Bulshoweynta dalkan Itoobiya (Qowmiyadey doonaan ha ka soo jeedeene) ay guud ahaan si buuxda u taageersanyihiin Siyaasadda hogaamiyaha Dowlad Deegaanka Soomaalida Itoobiya, Mudane Madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar.
Baadhitaankan oo si gaar ah oo dhinacyo badan taabanaya, diiradda loogu saarey Shacabka Deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa lagu ogaadey in Boqolkiiba Sagaashan (90%) Bulshoweynta u dhalatey Deegaankani ee ku nool Dalka gudihiisa iyo Dibadiisaba ay aad ugu faraxsanyihiin raalina ka yihiin Siyaasadda iyo Hogaanka Suuban ee Madaxweynahooda Mudane, Cabdi Maxamuud Cumar.
Caalamka oo idil, gaar ahaan Dalkeenan Itoobiya iyo Dalalka aynu dariska nahay ee inagu hareereysan, maanta waxaa si baahsan uga jira, Khilaaf iyo ismaandhaafyo salka ku haya Qabyaalad, Diimaha iyo Caqiidooyinka kala duwan ee ay Bulshooyinku aaminsanyihiin.
Haba kala darraadeene, waxyaabaha laga dhaxley ismaandhaafkan ku saleysan Qabiilka, Diimaha, Caqiidooyinka iyo Xagjirnimada waxaa ka mid ah aseyna ku koobneyn:
Dagaalo Sokeeye oo Bulshada kala fogeeyey
Isir Naceyb & Isir tir-tir
Weerarro joogta ah oo Argagixisnimo
Barakac & Qaxootinimo
Burbur Bulsho oy Jaajuusnimo ka dhalatey
Dhaqaale Darro iyo
Nidaam, Dowladnimo & Kaladanbeyn la’aan.
Ismaandhaafka ku saleysan kala duwanaanshaha Diimaha, Caqiidooyinka iyo Qowmiyadaha ama Qabiilka ayuu guud ahaan ka badbaadey Dalkeena Itoobiya, marka laga reebo Shaqaaqooyin yar-yar oo mararka qaar ka dhacay Deegaano ka mid ah kuwa uu Dalkan Federaalka Itoobiya ka koobanyahay een ahayn Deegaanka Soomaalida.
Marka hore Ilaaheena Weyn ee waaxida SWT, ayaa mahadda iska leh. Marka xiga, Maamulka suuban, Habsami u socodka, Cad-caddaanta, Cadaaladda, Fir-fircoonida, Feejignaanta, Dadaalka, Kartida, Geesinimada, Aragti Dheerida, Isku Kalsoonida iyo Hogaanka Daacadda ah ee Madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar wuxuu Deegaanka Soomaalida Itoobiya ka badbaadiyey Masiibooyinkaa aan kor ku soo sheegey.
Waxaa iyana Mahad, Ammaan, Bogaadin iyo Hambalyo mudan Siyaasadda ku saleysan Cadaaladda, Cadcadaanta iyo Sinaanta Qowmiyadaha ee Xisbiga talada Dalka haya ee EPRDF oo ay bahwadaag yihiin Xisbiga Dimoqraadiga Shacabka Soomaalida Itoobiya.
Madaxweyne Cabdi Iley, intii uu hogaanka talada Dowlad Deegaanka Soomaalida Itoobiya hayey, wuxuu ku guuleystey dagaaladii Af & Adinba lahaa ee uu ku soo afjarey dhaq-dhaqaaqyadii waxashnimo ee Kooxihii hubeysnaa ee Argagixisada ahaa. Kuwaasoo isugu jirey Nabadiidka (oo Deegaanada kale ee Dalka looga yaqaaney Shuftada) iyo Xagjirka gabbaadka ka dhigta Diinta Islaamka ee Nabaddu aasaaska u tahay.
Dadaal dheer iyo Wacyi galin ka dib wxuu Madaxweyne CMC ku guuleystey isku xidhka iyo mideynta Bulshada qaybaheeda kala duwan iyo Culimaa’u Diinka u dhashey Deegaanka si looga hortago, meeshana looga saaro Fikradaha Cidhiidhiga ah ee ay aaminsanyihiin Kooxaha Shuftada ah iyo kuwa kale ee Xagjirka ah ee ku soo gabada magaca Diinta sharafta badan ee Islaamka.
Dadaalkan dheer iyo dabargoynta Kooxihii nabad diidka ahaa iyo ka hortagga ama dhiciseyntii Fikradaha Cidhiidhiga ah ee Xagjirnimo iyo Argagixisada, waxaa suuragaliyey, guulaha laga gaadheyna soo de-dejiyey aasaaskii Ciidamada Soomajeestayaasha ah ee Liyuu Booliska oo lagu hirgaliyey fikir caafimaad qaba oo ka soo maaxdey Maskaxda Madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar.
Fikirkaa lagu diirsadey ee lagu nastey ee Madaxweyne CMC wuxuu badbaadiyey:
Dhiig badan oo ku daadan jirey dhulka Deegaanka Soomaalida Itoobiya.
Kufsi, Dhac iyo Xasuuq badan oo Argagixisada Shuftada iyo Kooxaha kale ee Xagjirka ahi u geysan jireen Bulshada ku dhaqan Deegaanka Soomaalida iyo Deegaanada kaleba.
Nolosha Ciidamo Federaal oo ahaa Dhalinyaro kasoo kala jeedey dhamaan Deegaanada iyo Qowmiyadaha uu Dalkeena Itoobiya ka koobanyahey.
Waxaa dhowaan isugu yimid Deegaanka Soomaalida Wufuud ka kala socotey Deegaanada kale ee Dalkan Itoobiya, Dowladda dhexe, Ismaamuladda Diri-dhabo iyo Addis-ababa.
Wufuudani waxey ka qaybgaleen shirkii 8aad ee XDSHSI ee dhowaan lagu qabtey magaalada Fiiq iyaga oo wakiilo ka ahaa Qowmiyadihii & Maamuladii ay ka kala yimaadeen.
Dhamaantood waxey xambaarsanaayeen oy soo gudbiyeen dareenka Shucuubta ay wakiilka ka ahaayeen oo aad iyo aad ugu faraxsan kuna kalsoon hogaanka Madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar ee Deegaanka Soomaalida Itoobiya.
Waxa ay wada xasuusanyihiin Deegaanka Soomaalida Itoobiya oo ahaan jirey meel aan innaba caadi aheyn oon waligeedba Nabadgalyo waagu ugu baryi jirin.
Meel gabbaad iyo dhufeys u ahaan jirtey Kooxaha Nabad diidka ee Shuftada iyo kuwa kale ee marba magac ha la baxeene ku caan baxay Fikirka Cidhiidhiga ah ee Xagjirnimada & argagixisnimo.
Madaxweyne CMC Hortii, Shucuubta iyo Qowmiyadaha kale ee Dalkan Itoobiya Waxey ka heysteen Deegaanka Soomaalida iyo Shacabkiisaba Fikir ka duwan ka ay maanta ka aaminsanyihiin. Fikirkaasi oo ahaa in Deegaanka Soomaalida ay ku noolyihiin dad iyaga Cadow u ah.
Meel lagu daadin jirey dhiiga Ehelkooda. Aabayaashood, Wiilashooda iyo kuwo ay jeclaayeen.
Meel Muwaadinka loo diro ama shaqo u tagaa aanuu nolol kaga soo noqon jirin.
Maantana mahadi ilaahey ha ka gaadhee iyo Madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar eh, Waxay u arkaan Deegaanka Soomaalida, Shacabkiisa iyo Madaxweynahoodaba Walaaladood ku guuleystey soo afjaridda, Colaadihii, Cadaawaddii iyo Ficilladii argagaxa lahaa ee kaga iman jirey dhanka Deegaanka Soomaalida Itoobiya.
Deegaanka Soomaalidu maanta waa meel ay usoo waxbarasho doontaan Wiilal iyo Gabdho dhalinyaro ah oo ka kala yimaada Deegaanada kale ee Dalka iyagoo ka faa’iideysanaya Barnaamijyada is dhexgalka iyo Aqoon / Dhaqan is weydaarsiga.
Waxa ay Qowmiyadaha kale aaminsanyihiin maanta in kuwo badan oo ka mid ah Deegaanada uu ka koobanyahay Federaalka Itoobiya ay ka faa’iideysteen kuna xasileen Geesinimada, Fikirka iyo Hogaanka Caafimaadka qaba ee Madaxweyne Cabdi iley oo ka badbaadiyey xeyndaabna uga noqdey dal-daloolo badan oo Madaxweyne CMC ka hor ay Colaado, Falal argagixisnimo iyo Fikrado Xagjirnimo kaga iman jireen Deegaanadooda.
Tani waa Sababta ugu weyn ee uu Madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar ku kasbadey kalsoonida inta badan shucuubta kala duwan ee Dalkan Federaalka Itoobiya.
Iyo sidoo kale kalsoonida Madaxda Dowladda Dhexe oo iyaguna aad raali uga ah kaalinta Hogaamiyeednimo ee Madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar kaga jiro Dalkan Itoobiya.
Madaxweyne CMC waa Hogaamiyaha kaliya ee magaciisu wada gaadhey dhamaan Deegaanada Dalka Itoobiya ka koobanyahay, iyadoo lagu wada xasuusanyahay isbadalada horumarka dhankastaba ah iyo Nabadgalyada wada saameysay Qowmiyad iyo Qoys walba oo Itoobiyaan ah, ee uu hirgaliyey mudadii uu talada Deegaanka hayey.
Madaxweyne Cabdi Iley wuxuu ku caanbaxay oo dhamaan Dalweynaha Itoobiya looga yaqaanaa: Gaashaanka Birta ah (Iron Shield) oo Dalku ka huwanyahey Colaadaha iyo Fikradaha Cidhiidhiga ah ee Xagjirnimo ee naafeeyey Dalal badan oo ka mid ah kuwa Caalamka gaar ahaan Geeska Afrika.
Gaashaan Bir ah oo kaga gudban Halis uga soo tallaabi jirtey Xadka ugu dheer ee ay Itoobiya la leedahay Dalalka dariska ah oo uu qaarkood burburey Nidaamkii Dowladnimo iyo kala danbeyntiiba.
Dalka Soomaaliya ee aynu walaalaha iyo dariskaba nahay oo ka mid noqdey kuwa ku dhacey dabinka Qaswadayaasha horboodaya Fikradaha Cidhiidhiga ah ee Xagjirnimo ayaan ilaahey uga baryayaa inuu Nidaamkii Dowladnimo, kala danbeyntii, Karaamadii iyo Nabadgalyo buuxda uu dib ugu soo celiyo.
Oo macnaheedu yahey:
Guulaha ay Ciidamadu ka soo hooyaan Dagaalada, waxaa lagu abaal mariyaa
Waxaan halkan ugu hambalyeynayaa Jeneraal Abraham Woldemariam Genzebu oo dhowaan lagu abaal mariyey, Wadaninimadiisa, Daacadnimadiisa, Geesinimadiisa, Howlkarnimadiisa iyo guulaha loo aayey ee uu ka soo hooyey la dagaalanka Shuftada iyo Argagixisada nabad diidka ah ee Deegaanada uu taliyaha Ciidan ka yahey.
Waxaa hubaal ah in uu guulahaa Jeneraal Abraham ku gaadhey xidhiidh wada shaqeyn iyo isku kalsoonaan ka dhaxeysa isaga iyo Madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar.
Guulaha uu Jeneraal Abraham ku muteystey abaal marinta kuwooda ugu muhiimsani waa Midho iyo Fikir ka soo maaxdey Maskaxda Caafimaadka qabta ee Madaxweyne CMC.
(Madaxweyne CMC wuxuu bishii Sep. 2012kii taariikhda ku galey isagoo noqdey Madaxweynihii ugu horeeyey ee Darajo ku tola garbaha Ciidan iyo Saraakiil Soomaali ah oo uu isagu aasaasey gaarna u ah Deegaanka Soomaalida Itoobiya.)
Waa dadaalka, kartida, awooda iyo Tayada Ciidanka Liyuu Booliska ee uu taliyaha u yahay Jeneraal Abdiraxmaan Labo go’le oon hubo inuu qayb libaax oo geesinimo ku leeyahay Guulaha Jeneraal Abraham lagu abaalmariyey. Anigoo Jeneraal Cabdiraxmaan Labo Go’le na u rajeynaya abaalmarintaa mid la mid ah, hadii allah yidhaa.
Ciidamada qalabka sida ee Dalka Itoobiya guud ahaan, waa kuwo qalbiga iyo laabta ku haya, kalsooni weynna u haya una mahad celiya Madaxweyne CMC oo ay ogyihiin la’aantii in aaney ka nasteen kana badbaadeen waxyeelooyin ka soo gaadha Argagixisada nabad diidka ah iyo kooxaha xag jirka ah ee gabbaadka ka dhigan jirey Deegaanka Soomaalida.
Jeneraaladii ka horeeyey Abraham ee aan nasiibka u yeelan in ay soo gaadhaan la shaqeynta Dowladda uu gadhwadeenka ka yahey Madaxweyne CMC, waxey ahaayeen kuwo Fashil Ciidan ku danbeyn jirey.
What is objectionable, what is dangerous about extremists, is not that they are extreme,
but that they are intolerable. The evil is not what they say about their cause, but what they say about their opponents.
Arinta lagu diidanyahey iyo halista Kooxaha Xagjirka ahi, ma aha xagjirnimada, ee waa iyagoo aan loo adkeysan Karin.
Sharkuna ma aha waxa ay ka sheegaan Qadiyadooda & Waxa ay aaminsanyihiin, ee waa arimaha aan sal iyo raadka toona laheyn ee ay ka faafiyaan kuwa ay is hayaan.
Sidoo kale Kooxaha ay Siyaasadda Dowlad Deegaanka Somaalida Itoobiya isku hayaan Madaxweyne Cabdi Iley ayaa waxay miciin bidaan, Aflagaado, Dacaayad, Cay, Been abuur iyo eedeymo aan sal iyo raad toona laheyn oo ay ka faafiyaan Madaxweyne CMC, Mas’uuliyiinta kale ee Dowladda iyo Ciidamadda Liyuu Booliska oo aynu maanta markhaati ka wada nahey in Shacuubta Itoobiya Deegaankasta oo ay ka soo jeedaanba kaga badbaadeen Dhiigii ubadkooda ee sida macno darrada ah ugu daadan jirey Ciida Deegaanka Soomaalida Itoobiya.
Nasiib wanaag Kooxahan Qaswadayaasha ahi, waxey ku guuldareysteen in ay iska hor keenaan Culimaa’u diinka Deegaanka iyo Bulshada inteeda kale.
Waxey sidoo kale ku hungoobeen iney Shar ka dhex abuuraan Mas’uuliyiinta Dowladda dhexe iyo Mas’uuliyiinta kale ee Dowladda Deegaanka Soomaalida Itoobiya.
Shacabka Deegaanka Soomaalida Itoobiya waa iney hal Mas’alo ogaadaan si ay u fahmaan Shaxda Siyaasadeed ee Deegaankooda. Waana sidan iyadoo korkaxaadis ah:
Madaxweyne CMC wuxuu aaminsanyahay Nidaamka Federaalka ah ee ay ku midoobeen Qowmiyadaha ama Deegaanada Dalku ka koobanyahey. Kuwaasoo leh Dowlad iyo Dastuur ka dhexeeya.
CMC isagoo aad isugu kalsoon, wuxuu aaminsanyahey iney iyagu u madax banaanyhiin maamulka Deegaankooda, Wixii khilaaf ah ee soo kala dhex gala, Mas’uuliyiinta Deegaankana ay iyagu dhexdooda xaliyaan.
Dowladda dhexena ay ka taageerto oo kaliya wixii iyaga awoodooda dhaafsan. Waana habka uu marwalba jeclaa in lagu xalliyo khilaafkii u dhaxeeyey isaga iyo Kooxdii Sharka isu baheysatey.
Kooxdan Sharka isu baheysatey ee u soo fuushey Baqasha degaanka.com, waa Koox aan khibrad ku filan oo siyaasadeed laheyn. Waa Koox ay ka maqantahey kalsoonidu, Cuqdad xaqiirnimona qaba.
Waa koox aan iyagu gooni isugu tashan Karin, in dabada laga riixo mooyee. Waa Koox aan awoodooda iyo xaqa uu leeyahey Deegaankoodu midna aan aaminsaneyn.
Canaan ka yaab cid ma doojo. Waa koox marwalba talo iyo faragalin ka sugeysey cid kale. Waa Koox Tuugana ka war gaaban, oon aduunyaba u war heynin. Waa kooxda iyagoo fadh–fadhiya oo aaminsan in cidkale soo faragalindoonto uu tareenkii u danbeeyeyna kaga tagey.
Waa koox ninkii Caqli leh u caddahey cidlada iyo baylahda ay ku sugnaan lahaayeen kuwa ilaahey bado ee ay Mas’uuliyeen u noqdaan Madexweyne CMC la’aantii.
Waa Kooxda markuu u taagwaayey uu Madaxweyne CMC ka tashadey ee uu adeegsadey awoodihiisa Dastuuriga ah ee uu kaga hortagey, Hagardaamooyinkii iyo Burburkii Nabadgalyo, Dhaqan, Dhaqaale, Horumar iyo Dowladnimo ee ay la damacsanaayeen iyaga iyo kuwii dabada ka riixayey Dowlad Deegaanka Soomaalida Itoobiya.
Waa koox markii uu ugu taagwaayey inuu u Caqli caliyo, uu Xil iyo Xasaanadba ka xayuubiyey.
Madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar waxaan ugu hambalyeynayaa dhismaha xubnaha Dowladda cusub ee Deegaanka ee uu dhisey.
Waxaan halkan hambalyo uga dirayaa dhamaan xubnaha ka midka ah Dowladda cusub ee uu Madaxweyne CMC soo magacaabey.
Waxaan hambalyo khaas ah u dirayaa Marwo Sucaad Axmed Faarax Barre oo uu Madaxweyne CMC u magacaabey darajadii ugu sarreysey DDSI ee Gabadh loo magacaabo oo ah Madaxweyne ku xigeenka Dowlad Deegaanka Soomaalida Itoobiya.
Sidoo kale waxaan iyana hambalyo u dirayaa Maajida Maxamed Maxamuud oo iyana ka mid ah gabdhaha ku soo biirey Xubnaha Dowladda ee wehelka u noqon doona labadii gabdhood ii horey uga midka ahaa xubnaha Dowladda ee Marwo Raxmo iyo Marwo Fartuun.
Shucuubta kala duwan ee Itoobiya iyo Madaxdooduba waxay aad raali uga yihiin hogaaminta Madaxweyne Cabdi Maxamuud waxa ayna yidhaahdaan:
Lee Ze Laalem Yii Nuur President Abdi Mahmoud (Long Live President Abdi Mahmoud)
Ha Noolaado Madaxweyne CMC.
Madaxweyne Cabdi Iley waa nin daacad u ah Dalkiisa & Deegaankiisaba, isuna arka Hogaamiyaha mid ka mid ah Deegaanada ku bahoobey Dalkan Federaalka Itoobiya ee ku midoobey Dastuur iyo Nidaam ka dhexeeya oo loo wada simanyahey.
Madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar = CMC
CMC = Current Man of the Country
Madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar = Current Man of the Country (CMC)
Abduljabar Sh. Dahir